“Maamulka sheydaanka ah, waa in laga tiraa qariiradda, tani hadda kadib ma ahan…riyo balse waa hadaf lagu guuleysan karo” ayuu yiri Sarreeye Gaas Hossein Salami oo uu soo xigtay website-ka Ilaalada ee Sepah.
“Afartano sano kadib kacaankii Islaamiga ahaa ee Iran, waxaan ku guuleysanay inaan yeelanno awood aan ku burburino maamulka Sahnuuniyadda” ayuu yiri.
Inkasta oo hadalka Salami uu yahay mid aan ku cusbeyn mas’uuliyiinta Iran, haddana waxa uu yimid xilli ay sare u kacday xiisadda barnaamijka Nukliyeerka Iran, islamarkaana gobolka ay ku jirto cabsi ah inay isku dhacaan Iran iyo Sacuudiga.
Hadalka Salami ayaa waxaa aad u baahiyey wakaaladaha wararka Tasnim iyo Fars ee dalkaas, oo lagu tiriyo kooxaha siyaasadda mayalka adag ee dalkaas.
Wakaaladda wararka dowladda ee IRNA ayaa inkasta oo ay hadalka baahisay, haddana waxa ay diiradda saartay in Iran ay leedahay awood ay kaga adkaato mucaaradkeeda, inkasta oo ay jirto “cadaawad” ka dhan ah.
Si ka duwan Salami, afahayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Iran Abbas Mousavi ayaa soo tweet gareeyey “Waxaan hambalyada sanad Yahuudeed cusub oo farxad leh u dirayaa jaalkeenna iyo dhammaan kuwa aaminsan diinta Nebi Muuse (NNKH)”
Qoraalka Mousavi ayaa ku dhignaa luuqadaha Persian, English iyo Hebrew.